Ogaden News Agency (ONA) – Addis Ababa: Hoggaamiyaasha Afrika oo Isugu Yimid Shirkoodi 26aad.
Addis Ababa: Hoggaamiyaasha Afrika oo Isugu Yimid Shirkoodi 26aad.
Xarunta Midiowga Afrika ee Addis Ababa waxaa ka fumay shirkii sanadlaha ahaa ee Midowga Afrika. Shirkan ayaa qodobada horyaala waxaa ugu wayn qalalaasaha ka taagan qaar kamid ah dalalka Midowga kujira.
Shirkan waxaa furay Madaxweynaha Zimabwe Mr Mugabe, ahna Madaxa wareega ee hadda xilka banaynaya ee Midowga Afrika. Furitaankii shirka waxaa lagu soo qaatay askartii dhawaan lagu diley gobolka Gedo ee ka socdey dalka Kenya, waxaana ka tacsiiyey Dr. Dlamini Zuma oo ah Guddoomiyaha Midowga Afrika.
Shirka waxaa kasoo qaybgalay xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Ban Ki-moon, waxaana uu furitaankii shirka ka jeediyey khudbad taabanaysa Midowga Afrika, isagoo sheegay inay tahay tii ugu danbeysay ee u jeediyo shirka sanadlaha ah ee Midowga Afrika.
Ban Ki-moon ayaa soo hadal qaadey hawlgalka Midowga Afika ka wado Soomaaliya, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay rajada Soomaaliya ka muqatay ee Midowga Afrika qayb kayahay.
Dalal badan oo Afrikaan ah ayaa sanadkan doorashooyin ka dhacayaan, waxaana Ban Ki-Moon ugu baaqay inaysan qalalaase isu bedelin doorashooyinkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kamid ah madaxda ka qaybgalaysa shirka 26aad ee Midowga Afrika.